China Copy Router miaraka amin'ny Machine Drilling Triple ho an'ny orinasa uPVC Profiles ary mpamatsy | Nisen
Adikao ny Router miaraka amin'ny Machine Drilling Triple ho an'ny profil uPVC
Model No.: LZ3F-290 * 100
Function: ampiasaina amin'ny fikirakirana ny lozisialy amin'ny alàlan'ny fanodinana karazana loaka, lavadavaka ary fantsom-drano ary loaka hidy amin'ny varavarankely sy varavarana aluminium.
Mampiavaka ny milina fikandrana upvc
➢ Ampiasaina amin'ny fikirakirana lozisialy amin'ny alàlan'ny fanodinana karazana loaka, lavadavaka ary fantsom-drano ary lavaka hidin-trano amin'ny varavarankely sy varavarana aluminium.
➢ Izy io dia manana endrika mampiavaka ny firafitra kely sy habe kely; ny tsindry rivotra no mitondra ny clamping.
➢ Izy io dia mety hahatratra hatrany ny fitotoam-pandeha amin'ny alàlan'ny fanodinana kopia, fandidiana mora sy fiarovana.
➢ Ny fampiasana ny switch ny tongotra dia mifehy ny varingarina manindry, azo antoka sy azo antoka.
380V, 50-60Hz, TELO Phase
25000r / min
Telo savaivony fandavahana
Làlan'ny fanodinana kopia
290 * 100mm
1000 * 1130 * 1600 (L * W * H)
Sombiny fandavahana telo
1set (pcs telo)
Manohana ny sangan'asa finday
Best & Huatong Shandong
Fitaovana sivana rivotra
Kitapo elektrika sy bokotra
AC contactor & MCB
Ireo bika fandavahana telo miaraka amina rafitra manokana sy ny motera misy rafitra mitsivalana / mitsivalana dia afaka mameno ny asan'ny masinina loaka fanidiana indray mandeha.
Ny rantsan-tànana (STDU) dia noforonina tamin'ny fomba izay azo ahitsy tsara kokoa ny elanelan'ny masinina.
Ny masinina rehetra feno fonosana hazo fanondranana mahazatra mba hahazoana antoka fa handray ny milina nomen'izy ireo baiko ny mpanjifa.
Ny milina sy kojakoja rehetra dia azo alefa an-dranomasina, amin'ny alàlan'ny rivotra na amin'ny alàlan'ny iraka iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny DHL, FEDEX, UPS.
➢ fonosana anaty: sarimihetsika mihinjitra
➢ fonosana ivelany: tranga hazo fanondranana mahazatra
➢ Matetika izahay dia handamina ny fandefasana ao anatin'ny 3-5 andro fiasana aorian'ny nahazoana vola.
➢ Raha misy kaomandy lehibe na milina namboarina dia maharitra 10-15 andro ny fiasana.
Vahaolana fikirakirana varavarankely Upvc
Hifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa izahay (teti-bola, velaran-javamaniry sns), hanome ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa.
Ny tatitra momba ny tetikasa sy ny famolavolana ny firafitry ny ozinina rehetra dia misy ho an'ny mpanjifa sarobidy.
Ilaina ny fikojakojana ny milina, hanampy amin'ny fiainanao milina io, azafady mba diovy ny vovoka aorian'ny fampiasana ny masinina.
7.1 Ho an'ny fiarovana ireo faritra azo atsofoka, afa-tsy ny fanadiovana ireo sombina fandavahana matetika eo ambonin'ny mason'ny masinina, ny menaka manosotra dia tokony hofenoina isaky ny tapany alohan'ny sy aorian'ny fiasana.
7.2 Ny fitoeram-paosin-davaky ny lavaka telo dia tokony hofenoina diloilo fanosotra supramoly amin'ny alàlan'ny kaopy misy menaka (mandritra ny 3 volana).
7.3 Raha tokony hanara-maso matetika ireo sombina fandavahana amin'ny toe-javatra tsara matetika ianao, tsy afaka mampiasa ireo bongo fandavahana diso.
Teo aloha: Piraofilina piraofilina mpanadio zoro CNC ho an'ny varavarankely sy ny varavarana
Manaraka: Masinina fanodinana rano roa Axis ho an'ny milina varavarankely UPVC
Adikao ny router miaraka amin'ny milina fandavahana Triple ho an'ny UP ...